Niorina tamin'ny taona 2008, ViMa Serv 'dia manolotra vahaolana manokana ho an'ny mpanjifa, ary mametraka ho tarigetra ny famahana ny hataka ny mpanjifa eo amin’ny lafony kalitao, ny vidiny, ny fe-potoana ary tolotra manokana.
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa, amin'ny alàlan'ny tolo-barotra miaraka amin'ireo mpiara-miasa toa ny Banky Iraisam-pirenena, ViMa Serv 'dia afaka mamaly ireo fitakiana ara-barotra amin’ny fanomezana vokatra samihafa sy fanampiana isan-karazany.
Mipetraka ho "mpamatsy tokana", ViMa serv’, dia manolotra ho an’ mpanjifa ireo vokatra tsara indrindra eo amin’ny kalitao sy ny vidiny.
Solontena ny marika maro, ny ViMa Serv’ dia manafatra entana ary manolotra vokatra avo lenta ho an'ny indostria marobe eto Madagasikara, ao anatin'izany ny sehatry ny fahasalamana, ny varotra antsinjarany, ny fananganana ary ny teknolojia.
Miandraikitra kaonty manan-danja
Miandraikitra ny varotra
Ireo tolotra omenay
Eo amin'ny sehatry ny varotra antsijarany, ViMa Serv 'dia manolotra ireto vokatra manaraka ireto amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa stratejika sy manokana miaraka amin'ireo marika avo lenta toa an'i Belle France:
- Fivarotana sakafo masira (fanokafam-bavony, tsindrin tsakafo masaka, paty, sakafo voatahiry).
- Fivarotana sakafo mamy (céreales, biscuits, sokolà, vatomamy)
- Vokatra fikojakojana, fidiovana ary fanatsarana ny endrika aman-bika :
ViMa Serv’ dia mpanamparitaka ny sokolà ny Barry Callebaut eto Madagasikara.
Eo amin’ny sehatra fananganana sy ny fitrandrahana, ViMa Serv’ dia manolotra vokatra firafitra sy famaranana toy ny contreplaqués, gabions et tôles.
Eo amin’ny sehatra ara-pahasalamana, ViMa Serv’ dia miara miasa amin’ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin’ny fanolorana fitaovana ao amin’ny labôratoara sy ny fiota.
Sehatra vaovao ao amin’ny ViMa Serv’, ViMa Tek dia miara miasa akaiky amin’ny mpamokatra any ivelan’i Madagasikara mba ho amin’ny fanamboarana takelaka nomerika sy finday, izay namaly ny tolo-barotra. nanomboka ny taoana 2021, ny marika dia nahalafo mihoatra ny 6000 vokatra ara-technolojia ho an’ireo mpanjifa , ary anisan’ireo karazana ministera.